जीवन/ दर्शन / शैली - Page 92 of 93 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and morewww.khabardabali.com | Page 92
चैत २७ गते, २०७१ - १९:११
सहवासको क्रममा भुलेर पनि नगुर्नहोस् यी गल्तीहरु
जब कुनै जोडी सहवासको लागि तयार हुन्छन् तब केहि कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सहवासको लागि तयारी गरिरहँदा पार्टनरको केहि व्यवहारले पूरै सेक्स मुडलाई अफ गरिदिने डर हुन्छ । यहाँ त्यस्तै कुराको चर्चा गरिएको छ...
चैत २७ गते, २०७१ - १८:०३
मधुमेह अर्थात चिनीरोग, रगतमा चिनीको मात्रा कम भएपछि लाग्ने एक जटिल रोग हो । यो रोगको एकिन उपचार अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न नसकेका कारण यसलाई जटिल रोग भनिएको हो । रगतमा चिनीको मात्रा बढि हुने भएकाले मधुमेह रोगीले...
यहाँ यस्ता खानेकुराको सूची दिइएको छ, जसले तपाईको बोसो घटाउन मद्दत गर्छ र शरीर सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्दछ । शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न चाहनुहुन्छ भने आउँदो दिनमा यस्ता खानेकुरालाई आफ्नो किनमेलको सूचीमा अवश्य समावेश...
चैत २० गते, २०७१ - २०:०८
छिट्टो रिस उठ्छ ? यसो गर्नुहोस्
अचानक रिस उठ्ने आफ्नो बानी देखेर वाक्क हुनुभएको छ ? हामीमध्ये धेरैलाई रिसाउनु राम्रो होइन भन्ने थाहा छ, तर यति हुँदा हुँदै पनि स्वभाव र परिस्थितीले मानिसहरु पटक–पटक रिसाइरहेका हुन्छन् । यस्तो बानीले धेरै मानिसहरुलाई...
चैत १२ गते, २०७१ - २०:०४
किन यौनको चाहना बढी हुन्छ महिलामा ?
एजेन्सी/प्राकृतिक रुपमा महिला र पुरुषका स्वाभावमा केही भिन्नताहरु छन । यौन रुची पनि यसै अन्तर्गत महिला र पुरुषमा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । पुरुषले सेक्सका बारेमा धेरै कुरा गर्छन् भने महिलाले सेक्सको चाहना धेरै...
चैत १२ गते, २०७१ - १७:४२
सडकमै यस्तो सालीभिनाजुकाे यौनहर्कत !
एजेन्सी / हाम्रो समाजमा श्रीमतीकी वहिनीलाई साली भनिन्छ । दिदीको लोग्नेलाई वहिनीले भिनाजु भन्छिन् । हाम्रो समाजमा एउटा उखान छ साली आधा घरवाली । अर्थात दिदीसंग विहे गरेपछि साली भिनाजुकी आधा घरवाली हो भन्ने हाम्रो...
चैत १० गते, २०७१ - १९:३९
जानी राख्नुस कण्डमको प्रयोग गर्दा हुने सामान्य गल्तीहरुः
कण्डम सुरक्षित सेक्सका लागी अति आवश्यक चिज हो । यद्यपी कतिपय जोडीहरुले कण्डमको प्रयोगले सेक्समा चाहे जती आनन्द लिन सकिदैन भनेर प्रयोग नगरेको पनि पाइन्छ । कण्डमको सहि ढंगले प्रयोग गर्न नजानेर यस्तो किसिमका समस्याहरु...
फागुन २७ गते, २०७१ - २३:४६
२० वर्षकाे उमेरमा के चाहन्छन् महिला?
अंग्रेजिमा एउटा भनाई छ “वुमन इज अ फराइन ल्याण्ड”, अर्थात महिला बुझ्नै नसकिने प्राणी हो । महिलाले साच्चिकै जिवनमा के चाहन्छ ? त्यो पनी २० वर्षको योङ्ग उमेरमा । यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो । महिलाले यो टिनएजमा केही...
फागुन २५ गते, २०७१ - २२:१४
जानिराख्नुस नियमित सेक्स गर्नु पर्ने ८ कारणहरु
सेक्स आनन्दका लागी हो । यसमा कसैको दुइ मत छैन । तर सेक्स त्यति मात्रैका लागी भने होइन । नियमित सेक्स गर्दा अझैँ राम्रो हुन्छ । के हुन् त ति कारण हरु ? हृदयकाे स्वस्थतामा सुधारः एक अध्ययनका अनुसार हप्तामा दुइ दिन भन्दा...
फागुन २१ गते, २०७१ - १९:२३
जानिराख्नुस प्याजका फाइदाहरू
प्याज तरकारीका लागी अति नै उत्तम मानिन्छ । खालि खाँदा होस या तरकारी सँग मिक्स गरेर खाँदा होस, प्रायः मानिसलाई प्याज नभई खाना नै नरुच्ने पनी हुन्छ । तर यो खाँदा मुख गन्हाउने, निन्द्रा धेरै लाग्ने जस्ता समस्याका कारण...